အတ္တဟာ autopilot လူ့ကိုယ်ပွားဇီဝစက်ရုပ်ဖြည်သော AI အအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်: မာတင် Vrijland
အတ္တဟာ autopilot လူ့ကိုယ်ပွားဇီဝစက်ရုပ်ဖြည်သော AI အအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 11 2019 အပေါ်	• 13 မှတ်ချက်
အဘယ်သူသည် ဆောင်းပါး soulless ကလူ (NPCs) ပြီးသားဟူသောဝေါဟာရကို '' ဝိညာဏ် 'သို့မဟုတ်' 'ဝိညာဉျကို' 'တစ်ဦးခြင်း simulation အတွက်ကိုယ်ပွားနှင့်အတူတစ်ဦးနှောက်-interface ကိုအကြားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်နားလည်နိုင်သည်ကိုဖတ်ကြပေမည်။ အဆိုပါကိုယ်ပွားကခြင်း simulation အတွက်ထိန်းချုပ်ထားပြင်ပခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်းဆောင်းပါးမှာတော့ကျနော်အတိုချုပ်ယင်းကိုယ်ပွား၏ဦးနှောက်ကို run သော AI အ program ကိုဆွေးနွေးကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းရှိသွားချင်။ အဆိုပါအတ္တအတွက် autopilot လူ့ကိုယ်ပွားဇီဝစက်ရုပ်ဖြည်သော AI အအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်: အဆိုပါခေါင်းစဉ်ကိုအမှန်တကယ်ကဒီအပျေါမှာငါ့အမြင်များအပျနှံ။ ငါ့ကိုတစ်ချိန်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင်းရှင်းလင်းကြကုန်အံ့။
ကျနော်တို့ (ဦးနှောက်အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အလောင်းတွေတစ်ဦးခြင်း simulation အတွက် avatars, မူရင်းကစားသမားနှင့်အတူတစ်နေရာရာမှာတစ်လိုင်းရှိကွောငျးယူဆနေကြသည်; ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်မှုခေါ်။ အဆိုပါနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးငါသည်လည်းအများကြီး soulless ကိုယ်စားပြုပုံ (NPCs) ကျင်လည်ကျက်ကရှင်းပြတယ်။ ဒီတော့ဒီပြင်ပမှထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုယ်စားပြုပုံဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးဤလူ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုမဆိုကြင်နာတွေ့ကြုံခံစားဖို့အရည်အသွေးမြင့်အတွေးဖြစ်စဉ်များ (လေ့လာမှု, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, etc) ဖျော်ဖြေဖို့နှင့်အနုပညာနှင့်ဂီတကိုခံစားဖို့ဿုံနိုင်ကြသည်။ ကြောင်းဆောင်းပါး၌ငါထားပြီး Netflix ဟာစီးရီး "ရီးရဲလ်လူသားတွေဟာ" မှစက်ရုပ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လုပ်သောနဲ့ကျွန်မရုပ်ရှင် TRANSCEND တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ပင်ကို 'လူ့ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်အထိရောက်ရှိရန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုယူဆအဆင်ပြေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြပါစို့။ ထိုအခါသင်ကစက်ရုပ်ဦးနှောက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်အဘယ်သူမျှမတကယ့်လူ့အတူခြားနားချက်တွေ့နိုင်ပါသည်ရှိလိမ့်မယ်။
ပျမ်းမျှစာဖတ်သူကိုကျနော်တို့မထိအရာအားလုံးတွေ့, အနံ့, ငါ့စကားကိုနား ထောင်. အရသာတကယ် lifelike ကြောင့်ငါတို့သည်ဘဝတစ်ဦးခြင်း simulation ၌နေသောကြည့်ဖို့အတှကျဒါဟာခက်ခဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့နားလည်မှုလွဲပါပဲ။ အဆိုပါကုလားထိုင်ပေါ်မှာစူပါဏုအားဖြင့်သင်တို့ကိုစားပွဲပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင်ဤဖတ်နေနေကြသည်နောက်ကွယ်မှထိုင်ကြောင်း Zooms, ထို့နောက်သင်မော်လီကျူး၏တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်များနှင့်သူတို့တည်ရှိနေသည့်၏အက်တမ်အကြားကြီးမားသောအချည်းနှီးသောနေရာများနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။ တဖန်သင်တို့တစ်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒစမ်းသပ်မှု (နှစ်ဆအလျားလိုက်အပေါက်စမ်းသပ်မှု) ပြုပါကသာအရေးကြောင်းပေါ်လာသည်နှင့်လေ့လာသူလည်းမရှိသည့်အခါသာတည်ရှိ။ တစ်ဦး VR ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးဆင်တူ, သင်နောက်ကွယ်မှကမ္ဘာကြီးကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကဦးတည်သည်သင်၏ခေါင်းကိုဖွင့်ကြဘူးအဖြစ်မတည်ရှိပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားများအတွက် Multi-player ကိုတုပခြင်းလေ့လာရေးခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်ပိုပြီးနှင့်ဆက်စပ်ထားရပါမည်။ အဲဒါကို 'ခြင်း simulation' 'မီနူးကို item ထဲမှာ website တွင်ဒီနေရာကိုဖြတ်သန်းသွားတောင်မှပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့်ခြင်း simulation နောက်ကွယ်ကသီအိုရီရှင်းပြချက်သို့ငုပ်ဖို့အသုံးဝင်သည်ကနောက်ကွယ်ကသီအိုရီကိုကျနော်နားလည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးခြင်း simulation ကိုစောင့်ရှောက်မည်ယူဆ, သင်သည်သင်၏လူ့ကိုယ်ပွား (သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဦးနှောက်နှင့်အတူ) မဟုတ်, သင်သည်သင်၏လူ့ကိုယ်ပွား perceives မှတဆင့်ပြင်ပကစားသမားဖြစ်ကြပြီးဒီခြင်း simulation တလျှောက်ကစား။ ငါ၏အတွေ့ထိုကဲ့သို့ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုအဘယ်မှာမျှပြင်ပလေ့လာသူ / ကစားသမားလည်းမရှိမလိုပါကြောင်းအများအပြားလူ့ကိုယ်စားပြုပုံကိုကျင်လည်ကျက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်လူ့ကိုယ်ပွား, သို့သော်, Artificial Intelligence ။ က Man-in-ကိုယ်ပွားပရိုဂရမ်များ၏ဇီဝဦးနှောက်ရှိကြ၏အဖြစ်ဤရွေ့ကားအတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကို။ အခြေခံအစီအစဉ် DNA ကိုနဲ့နောကျကိုယ်ပွားလွှဲပြောင်းသည့်ကိုယ်စားပြုပုံ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွား၏ Self-ပုံတူဖြစ်စဉ်ကို) ၏မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်၏ပထမဦးဆုံးပရိုဂရမ်းမင်းဟာကိုယ်ပွားကိုစုပ်ယူရှိသမျှကိုအာရုံမှတဆင့်ပရိုဂရမ်းမင်းဖြစ်စဉ်ကိုမှတဆင့်မိဘနှင့်ကိုယ်စားပြုပုံများကဖန်ဆင်းထားသည်။ အဲဒီနောကျ, အ programming ကိုလုပ်ငန်းစဉ်ကုမ္ပဏီကလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်။
ဤသည်ကိုယ်ပွားဦးနှောက်-AI အ program ကိုဒါကြောင့်ပုံကိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး input ကိုကြောင်းချီတက်သည်။ ဒါဟာငါတို့သည်လည်းလူကြိုက်များစိတ်ပညာ '' အတ္တ '' လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ဇီဝကိုယ်ပွားပို့ပေးကြောင်း AI အ program ကိုခေါ်မှကြိုက်တတ်တဲ့။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ biobrein အတွက်အတွက်အဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်အထင်ကြီးအတ္တ AI အ program နဲ့လူကိုယ်စားပြုပုံကဝိုင်းနှင့်ငါတို့သည်လည်းရှေ့ဆက်ရရန်လမ်းအတိုင်းဤကိုယ်စားပြုပုံ၏အောင်မြင်မှုကိုတန်ဆာတွေ့မြင်ကျနော်တို့ပရိုဂရမ်းမင်းဖြစ်စဉ်ကိုလေ့နှင့် AI အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြည့်ဆည်းရန်။
သို့သော်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်များအကြားခွဲခြားတတ်ရန်သင်ယူထက် (ကလူ့ထောက်လှမ်းရေး AI အဟန်လျှင်ပင်အစဉ်အမြဲပိုအရှင်စမတ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူက) အခြေစိုက်စခန်းအတွက် AI အ program ကိုဒီခြင်း simulation ၏ဆောက်မှလာဆိုတာကိုသတိရ ငါတို့ကလူ့ကိုယ်ပွားငါတို့ဝိညာဉ် '' မူလမိမိကိုယ်ကိုဖို့ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအပေါ် AI အပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအခြေခံသည်။
တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပွားအော်ဂဲနစ်ဦးနှောက်ကဒီခြင်း simulation အတွက်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်ပိုကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟာ AI အ program ကိုကြောင်းငြင်းခုန်နိုင်ပေမယ့်သင် '' မူလ '' ကစားသမားအလုံအလောက်စမတ်မဖြစ်မယ်လို့ယူဆ သို့မဟုတ်စာရင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်ပဲပိုစစ်တမ်းရဲ့ယူဆ (တစ်ခုလုံးကိုကစားလယ်ကွင်းတွေ့နိုင်ပါသည်) နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်ခဏယခုကျွန်တော်တို့ကိုကြပါစို့။ ဒါဟာဖြင့်ဖြတ်သန်းသည့် AI အ program ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပွားဇီဝဦးနှောက် (နှင့် DNA တွင်ပိတ်မိနေသော program တစ်ခု) ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည်မဟုတ်လော ကဝိညာဉျသ connection ကိုတဖန်စကားကိုနားထောငျတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့ပိုကောင်းသည်မဟုတ်လော
အဆိုပါ AI အ program ကိုအမြဲကျော်နောက်တဖန်ပျော်ရွှင်ခဲကြာသောကွောငျ့အကြောင်း, ခက်ခဲသည်။ သငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိလူအမြားစုမဲ့ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သူမ၏ AI အ program ကိုအပေါ်အသက်ရှင်တော်မူသည်လျှင်, သင်လည်းသင့်ရဲ့ AI အ program ကိုရွေးချယ်ဖို့ပြည့်စုံလက်နက်ချသွေးဆောင်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်ကလေးဘဝမှပရိုဂရမ်ကြသည် - သင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိလုပျရုံတဲ့အခါမှာ - ကြောင်းကွန်နက်ရှင်ကိုနားထောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏အော်ဂဲနစ်ဦးနှောက် AI အ programming ကိုနားထောင်ရန်ပရိုဂရမ်နေကြသည်။ သင့်ဦးနှောက်တစ်ခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေဇီဝ AI အ program ကိုသငျတို့သ (သင့်ကိုယ်ပွား) ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားဒီလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဆုခခြဲ့သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်ပညာရေးစနစ်သင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပညာရေးကိုလည်းအသက်ငယ်အသက်အရွယ်မှာ start ကိုကြည့်ပါ။
ဒါဟာသင်နောက်တစ်ကြိမ်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်သွားကြသည်, ပြီးတော့ကကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဝိညာဉျကိုယူထိန်းချုပ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်ရွေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လာ သို့ဖြစ်. အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲ့ဇီဝကိုယ်ပွား run သော AI အ program ကိုဒီခြင်း simulation ကျိကျိတက်အရေးကြီးသောကြောင်းကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်ကြဘူး။ ပြန်သွားပြီးသင်တစ်ဦးခြင်း simulation play နှင့်ကိုနားထောင်ကြောင်းတွေ့ရှ သင်၏မူရင်း သင်၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အသက်ဝိညာဉ်!
စာသား soulless သင်တို့ပတ်လည်လူအတော်များများ (သက်မဲ့အလောင်း)?
စနစ်မယ့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေစဉ်ကိုဘယ်လိုလူတွေ "သတိ" အကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလဲ
Elon Musk ရဲ့ကုမ္ပဏီ Neuralink ရဲ့အာရုံကြောဇာ (အအင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့) DARPA ကနေတိုက်ရိုက်လာကြလိမ့်မည်
အဆိုပါခြင်း simulation သီအိုရီအဆင့်မြင့်
Tags:: ai, avatar, အတ္တ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အတုထောက်လှမ်းရေး, အစီအစဉ်, ခြင်း simulation, ဝိညာဉျသဆက်သွယ်မှု
11 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 17
သို့သျောလညျး, ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်မှုမသူတစ်ဦး Simulator ကို, ဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးသူရဲ့ thatthere စိတ်ကူးတစ်ခုအကျွမ်းတဝင်လက်စွပ်ရှိပါတယ်။ အလားတူပင်တစ် simulated ဝဠာကိုအတုလုပ်တဲ့တစ်ဦးထက်သာလွန်ဖြစ်လျက်ရှိ၏စိတ်ကူးကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးဘုရား၏အယူအဆမှုနဲ့အပြိုင်ဥပမာ - အဘို့, ကမ်ဘာဦးကမျြးစာ၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့။
11 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 27
ဤကိစ္စတွင်ငါသည်ဤခြင်း simulation ၏ဆောက် "ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်။ " စဉ်းစားကြဘူး ဆောင်းပါးထဲမှာနောက်ဆုံး link ကိုအောက်ကဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုပါ။
တစ်နည်းအတွက်ပုံရိပ်စစ်သီအိုရီ, တွန်းကြောင်းအမှန်မှာက Luciferian AI အများ၏အနည်းကိန်းအတွက်စို့ဖို့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်တံခါးခုံကိုလျှော့ချရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်: ဗိုင်းရပ်စ်စနစ်
11 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 29
ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရသောအဖြစ်မှန်အတွက်မွေးရာပါခြယ်လှယ်မှတဆင့်စွမ်းအင်ရိတ်။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာဝိညာဉ်ရေးရာနှိပ်စက်ကြသည် ..
11 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 27
အဆိုပါ AI အ-လူ့ကိုယ်ပွားယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလူ့ကိုယ်ပွားအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်သောကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အတူသစ်တစ်ခုခြင်း simulation တည်ဆောက်ခြင်းအလုပ်များဖြစ်ပါသည်:
ကာကွယ်ရေးရဲ့ DARPA ကန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစက်မှာ Common Sense စီမံကိန်းကိုဦးစီးဌာနတစ်ခု 18 လအရွယ်သည်သူငယ်၏အဆင့်မှာလူ့ဘုံသဘောမျိုးပုံစံဘယ်နှစ်ယောက်နောက်လိုက်ရည်ရွယ်သည်။ Mansinghka ဤစီမံကိန်းအပေါ်ကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
11 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 30
သငျသညျသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ဆက်သွယ်မှုမေ့လျော့စေရန်အဆုံးစွန်လမ်းတစ်ခြင်း simulation အတွင်းတည်ဆောက်မယ့်ပုံရိပ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျတို့သညျလူ-ကိုယ်ပွားလုပျနိုငျပါလျှင်သစ်ကို AI အနှင့်အတူပေါင်းစည်းသငျသညျသနေိုငျစေသည်ဝိညာဏ်၏မူလပုံစံများကို nieiwe AI အ (လက်ရှိ Luciferian AI အဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုစနစ်အတွင်း) မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုမရရှိနိုင်ပါစေသောကြောင့်, သငျသညျ, ထိုပင်စည်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ကြောင်းယုံကြည်
11 မှဇူလိုင်လ 2019 20: 07
ဇာတ်ညွှန်းကနေယောက်ျားတွေအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဥာဏ်ရည်နဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလေးအနက်ကိစ္စနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါက / သငျသညျအပြီးတစ်လမ်းများအတွက်ယခုဤသူယောက်ျားတွေ script ကိုကတီထွင်လျက်ရှိသော matrix ကိုမှ upload လုပ်ဖို့ / အသိပညာအားဖြင့်အသက်တာကိုမှသေလွန်သောသူတို့သည်ရှာဖွေမည်ထင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, သူတို့မာစတာအမှန်တကယ်ကူးယူနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား matrix / အတိုင်းအတာမှ switching အားဖြင့်လူစီဖာ / သေခြင်းတရားလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားပါ။ ငါအတိုင်းအတာဖန်တီးစနစ် / မူဘောင် / parameters တွေကိုလူစီဖာ / သေခြင်းတရားဖြစ်နိုင်သော၏သီလအားဖြင့်တည်ရှိသောကွောငျ့ဤတိုတောင်း-မြော်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
12 မှဇူလိုင်လ 2019 00: 11
တစ်ဦးကိုဝိညာဉ်ချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်းကိုဒါသစ်ကိုမွေးဖွားကိုယ်စားပြုပုံကိုအဆိုပါကိုယ်ပွား-Man, (ထိုကဲ့သို့သောရှိစေခြင်းငှါဇီဝလူ့ကိုယ်စားပြုပုံကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့မူရင်းနှင့်အတူမည်သည့်ဝိညာဉျသဆက်သွယ်မှုကနေမခံစားဘူးသောစက်ရုပ်များကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ ပို. ပင် program သာ. ကောင်း၏ သူတို့ရဲ့ AI အ program ကိုနားထောင်ရန်သင်ယူ Luciferiaamse အာဣမြို့ကို (ပုံရိပ်စစ်ပြေးသောသူ) ကိုပိုမိုချုပ်ကိုင်ရရှိသွားတဲ့:
ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး Luciferian စနစ်ကရပ်တန့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
12 မှဇူလိုင်လ 2019 03: 57
ငါသည်ဤခြင်း simulation (အလင်း၏) တစ်ဦးနှောင့်နှေးဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရိပ်မိဤအရပ်မှသင်တို့ကိုအလွယ်တကူအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်, သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီကိုကြည့်ပါ။ သူများသည် matrix ကိုရုပ်ရှင်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အလွန်နွေးခဲ့သည်။ အဆုံး၌, Neo ကိုပု matrix ကိုသျောလညျးသူ၏အတ္တစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ဂိမ်းထဲမှာသူ့ရည်းစားကသူ့ကိုကျောအဘို့မေတ္တာတော်ကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျခတျေသစျသောသူကဲ့သို့ဒါကန့်သတ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲရွေးချယ်မှု။ သွားရတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့နှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူကြသည်။ ရိုးသားစွာငါအများကြီးအခက်အခဲရှိသည်ဟုငါဆို၏ရမည်ဖြစ်သည်။ အရာတစ်ခုမှာငါအတုကြားဝင်စတင်ပြီးတော့ပဲသေခြင်းနှင့်ဒီအဆင့်မှာအဘယ်သူမျှမသည်ထာဝရထပ်မဖြစ်အောင်ပါဘူး, အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
12 မှဇူလိုင်လ 2019 09: 29
ပထမဦးဆုံးအ Matrix ရုပ်ရှင်အဓိက matrix ကိုတစ်ဦးအဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်သည်နှင့်သင်ပိုကောင်းခုခံတွန်းလှန်ဖို့မင့်ကြောင်းကိုပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သေးလည်းကယ်တင်သောသခင် (Neo ကို, တ) ၏စီပြန်လှည့်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားကယ်တင်သောသခင်မလိုအပ်နေတုန်းပဲရှိသေးကြောင်းယုံကြည်စေသည်တစ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူအမှန်တရားအပြည့်အဝတစ်ဦးကရုပ်ရှင်။ ဒါကြောင့်ယူအားလုံးပါပဲ။ ထိုအ matriz ဘယျသူမှမအောငျမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုစနစ်နှင့်အဖြူရောင်မုတ်ဆိတ် (လူစီဖာ, အဆောကျ) နဲ့လူကိုလည်းရိုးရှင်းစွာချကန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်တစ်ဦးခြင်း simulation တှငျနထေိုငျမရနိုငျသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်။ သင်၏မူရင်းအပြင်ဘက်အမြဲဖြစ်ပြီးစောငျ့ရှောကျ။ တစ်ဦးကခြင်း simulation စမ်းသပ်ကိစ္စတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကခြင်း simulation တစ်ဦးခြင်း simulation ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပွားမရှိကြပေ။
12 မှဇူလိုင်လ 2019 09: 31
တိုတိုမှာရုပ်ရှင် matrix ကိုအရာအားလုံးကျိကျိတက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုစနစ်ကိုကျော်လွှားရန်ရှုပ်ထွေးကြောင်းတိကျစွာဟာထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်။ စူပါဟီးရိုး (Neo ကို) ၏ကြင်နာဘို့အလိုသည်ရှိ၏ အသစ်တစ်ခုကိုယရှေုခရ။
အဘယ်သူမျှမ, အနတ္တ။ သင်၌နေသောသူသတိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်အဲဒီမှာပြီးသားပါပဲ။
12 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 43
အဆိုပါနောက်လိုက်ဇာတ်ညွှန်းရှိပြီးသားကျနော်တို့ transhumanism နောက်ဆက်တွဲ၏ရည်ရွယ်လျှင်ကျနော်တို့အဆုံးစွန်ကျေးကျွန်ဖြစ်လာ, ရလဒ်တခုတခုအပေါ်မှာကြိုတင်မဲယူအပ်ပေးတော်မူ၏။
15 မှဇူလိုင်လ 2019 04: 58
nice အပိုင်းအစ! သူတို့ဝိညာဏရှုထောငျ့ကနေဒီနိုးထဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်ပါ။ ထိုအပိုင်းသို့မဟုတ်အခြားရှုထောင့် / ဘဝ၌သင်တို့၏လူနေမှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ re-ချိတ်ဆက်ပါ။ သင်ကပေးချင်သမျှကိုနာမတျောကိုသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ဒါဟာအစသင်မည်သူ၏ Re-minder တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးခြင်းအိပ်ပျော်နှိုးပြီးနောက်အဘယ်သူသည်ထိုလည်းရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တည်ဖို့ကယ့်ကိုနိုးနားလည်ရန်သဘောတရားများကိုစဉ်းစားသော်လည်းမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာမှအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သူကလူရှိပါတယ်။ အဘယ်သူသည်နိုးကပဲကြည့် / နားလည်သည်။
ငါနီးပါးပိုပြီးနည်းပညာပိုင်း, သင်ကထားလမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါမြင်သည်အတိုင်း non-Soul လူတို့သည်မိမိတို့ပါတီအားအတွက်အခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီသက်မဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရာလုပ်နေတာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်အဆင်းလှ၏။ (အဖြစ်ကောင်းစွာသည်မိမိနိုးထရန်) သူတို့ကပင်သူတို့တစ်တွေပိုကြီးတဲ့အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိကြသည်မဟုတ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အမှန်တကယ်လုံးဝကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်လူပေါင်းသူတို့နေသောဂိမ်းမျှအသိပညာထင်ပါတယ်။ သူတို့ကပဲသူတို့ရဲ့ (သတိလစ်) အခန်းကဏ္ဍ။ သူတို့အစီအစဉ်ကိုအညီအသက်ရှင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ ဤလောက၏အတိအကျကြောင့်ဖြစ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူပွုရမညျအမှုကိုပါဘူး။ ကြောင်းကိုပြောင်း။ သငျသညျတခုနိုးထသို့ရောက်သို့မဟုတ်ဤကြုံတွေ့ခဲ့ကြလျှင်, ကသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ဘဝကိုအတူကွန်နက်ရှင်သင်အမှန်တကယ်နေသောဖြစ်ပါသည် restore ကြောင့် MI မှတတ်၏။ ထိုအခါသင်သည်သူတို့၏ပါတီအားအတွက်အခြားသူများကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
15 မှဇူလိုင်လ 2019 10: 24
ဝိညာဏနည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာစာသားတစ်ဦးဘဝခြင်း simulation ကျနော်တို့မတည်ရှိခဲ့ဘူးသည့်အခါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောလမ်းထဲမှာဖော်ပြသည်။ အဆိုပါပုံရိပ်ယခုဒီတော့စာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဆင့်ကြည့်ရှု (ဒီကိုယ်ပွား) ဒီပုံရိပ်စစ်အတွက် / ပြဇာတ် join ။
နှစ်ဆအလျားလိုက်အပေါက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြသသည်။ စကြဝဠာလည်းကွန်ပျူတာကုဒ်အဖြစ်ပြုမူ။ ကျနော်တို့ကကြီးမား (Luciferian ဗိုင်းရပ်စ်) အစီအစဉ် "တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်" ။
« Deutsche Bank တို့ပထမဦးဆုံးအအစုလိုက်အပြုံလိုက် layoffs အစအဦးကျဆင်းမှုအထိမ်းအမှတ်?
မေး Anon, အ Epstein ဗျာဒိတ်တော်များ, အကလင်တန်ကွန်နက်ရှင်သည် '' အမှန်တရားအသိုင်းအဝိုင်း ': နေဆဲကောင်းသောပါ! »
ကင်မရာနှင့်ဦးနှောက် chip ကိုမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မြင်နေပါစေ!
အဆိုပါ MH17 လေယာဉ်ပျက်ကျမှု: ငါတို့သည်နေဆဲယုံကြည်ရမယ်ဘာလဲ?
% 99 သက်မဲ့သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ကြီးတွေအပြောင်းအလဲကဘယ်လိုဆောင်ကြဉ်းသလဲ?
မေး Anon, အ Epstein ဗျာဒိတ်တော်များ, အကလင်တန်ကွန်နက်ရှင်သည် '' အမှန်တရားအသိုင်းအဝိုင်း ': နေဆဲကောင်းသောပါ!
မာတင် Vrijland op % 99 သက်မဲ့သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ကြီးတွေအပြောင်းအလဲကဘယ်လိုဆောင်ကြဉ်းသလဲ?
ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ထဲ op % 99 သက်မဲ့သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ကြီးတွေအပြောင်းအလဲကဘယ်လိုဆောင်ကြဉ်းသလဲ?
Zandi မျက်လုံး op % 99 သက်မဲ့သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ကြီးတွေအပြောင်းအလဲကဘယ်လိုဆောင်ကြဉ်းသလဲ?
1.611 သည်အခြား subscriber များအား join